Par Taratra sur 31/07/2021
Nampitandrina ny eo anivon’ny Foloalindahy ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny Jly Rokotonirina Léon Richard, manoloana ny fisian’ny teti-dratsin’ny sasany hifofo ny ain’ny tomponandraiki-panjakana ambony sy ny filohan’ny Repobika. Tsy handeferana ny fanaovana heritsera, fa misy lalàna velona ny amin’ny fanaovana asa fanakorontanana sy famadihan-tanindrazana.
Mitohy ny fakana am-bavany izay mety ho voasaringotra na hanome fanampim-baovao ny amin’izay fanonganam-panjakana izay. Anisan’izany, ohatra, ny arsevekan’Antananarivo eo anivon’ny Ekar, ny Mgr Razanakolona Odon Marie Arsène, izay nohenoina nandritra ny ora efatra. Tsy nisy nipika ny resaka, nefa fantatra ihany fa voateniteny ny amin’ny voarohirohy misandoka ho mpanolotsainy.
Amin’izany, nisy ny fihaonan’ny tomponandraikitra eo anivon’ny Ekar, notarihin’ny kardinaly Tsarahaza Désire, tamin’ny filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry. Voaresaka tamin’izany ny tsy fanaovan’ny fiangonana politika sy ny tsy fankasitrahany heritsera. Teo koa ny fitadiavam-bahaolana amin’ny vidim-piainana, ny tsy fandriampahalemana, ny fanamboaran-dalana…
Mandra-pitrangan’izay hitranga ny amin’ny tohin’ny famotorana sy ny ho fandehan’ny fitsarana ny raharaha, ranolava ny famoahana fanambarana: manameloka ny herisetra, tsy mankasitra fanonganam-panjakana… Eo koa ny fanazavan’ny mpahay lalàna sasany fa tokony hohajaina ny fanadihadiana, ka tsy hamoaka vaovao aloha izay tsy tomponandraikitra amin’ny famotorana.
Amin’izany rehetra izany, mila fitoniana sy filaminana ny raharaha: ndrao maika tsy faingana hahalala zavatra mialoha? Saro-pady ny raharaha.